Kuongororwa kweSayithi neSemalt Dhijitari
Nyanzvi dzeSemalt dzinopa nhatu nzira dzekuratidzira dze SEO kune vatengi-AutoSEO, FullSEO, uye Analytics kampeni. Pamberi peshanduko yega yega, nyanzvi yedu yeSEO inozoongorora zvakazara online zviwanikwa kuti zvitevedzwe zviyero zvewebhu dhizaini uye SEO ongororo.
Yedu AutoSEO Campaign inopa yakanyanyisa kuongorora yevatengi yepamhepo chitoro chekutsvaga injini optimization. Mushandirapamwe weFSSEO unosanganisira wandei wongororo kuti ubatsire bhizinesi kukura neinternet munguva pfupi pfupi. Ipo, iyo Analytics Campaign inopa kuongorora kwepamberi kwewebsite yemutengi.
Munguva yeTranstics Campaign, tinodzokorora webhusaiti yemutengi uye tishande nekambani yako kuvimbisa online kubudirira. Munguva Yese Yekuongorora Campaign, yedu SEO kuongororwa ichashanda nekambani yako yega yega nhanho nzira. Isu tinopa yakazara yakazara mushumo wekuongorora zviitiko zvakakosha kubva kune yako webhusaiti, pamwe nekurudziro yekutora yako saiti kuenda kuGoogle TOP nzvimbo.
Chii chinowanikwa webhusaiti?
Kuonekwa kwewebsite ndiyo maitiro ekuwana webhusaiti inowanikwa pane huru yekutsvaga injini seGoogle. Kuonekwa kwewebsite kunoonekwa nehuwandu hwehuwandu hwekushandisa mukati mewebhu saiti inotungamira mibvunzo yakakosha; zviratidziro zvazvino uno zvinozivisa huwandu hwezvinoratidzwa saiti mukati meinjini yakapihwa yekutsvaga; uye yakajairika data mukati mewebhu webhusaiti iyo inobatanidzwa mukuiwana iyo kuiswa mune yekutsvaga injini.
Kuwanda kwemubvunzo weinjini yekutsvaga kunoonekwa kana kazhinji vashandisi vachibvunza mubvunzo wakatsvaga muinjini yekutsvaga. Izvi zvakaverengerwa nehuwandu hwezviratidziro mukati memwedzi wakapihwa. Nzvimbo iri muSERP ndiwo mutsara iyo peji rewebhu webhusaiti inowira mukati kana chinzvimbo mukati memubvunzo. Kubvumirana kwenzvimbo kunoenderana neinodaidzwa kuti "hanya density", iyo inoratidza iwo mutsara peji rekuratidzwa iri. Chiyero ichi chinoverengerwa kuti uone hunhu hwemubatanidzwa
Semalt's SEO nyanzvi dzinogona kubatsira webhusaiti yako kuwedzera yayo yekutsvaga injini kuoneka. Kana tichiita iyo yakazaraSESEO kuongororwa kwewebsite, isu tinosarudza madudziro chaiwo ezvekudzokorora izvo izvo zvinoda kuitwa. Kune vamwe vezvitoro zvepamhepo, nzvimbo yavo yakakosha kubatsira kubatsira kuwedzera kwavo kwewebhu webhusaiti. Saka, tinotaura nezvekwavanogara pane yavo peji yepamusha. Ipo, dzimwe niches, semantics dzinokosha zvimwe. Nekudaro, isu tinotora yakadzika nzira inovavarira kugadzirisa yavo yekutsvaga injini optimization. Kana izvi zvichinge zvave chokwadi, nyanzvi kuSemalt dzinove nechokwadi chekutora nzira yakanakisa yekubatsira kuwedzera huwandu hwemazwi mukati mewebhu webhusaiti yako kuti ibudirire.
Paunenge uchishanda neSEO, pane matatu zvakakosha maantantics:
Kugara kazhinji : Izvi zvinoratidza kangani pamwedzi mushanyi achipinda runyorwa rwakati mubhari yekutsvaga. Iyo yakakwira frequency, vanhu vazhinji vanozopihwa webhu saiti iyo iri yepamusoro SERP.
Iko kushandurwa ndiyo chikamu chehuwandu hwevashanyi vewebhusaiti vakaita chiito chakakosha pairi kune yavo yakazara nhamba.
Kukwikwidzana kubvunza zvinoreva mutengo unozodikanwa kuti upinde mu TOP yeiyi kiyi kiyi.
Keywords uye yavo frequency
Mibvunzo yemushandisi inowanzo kukamurwa kuita mapoka matatu:
Yakakwira-frequency mibvunzo - yakajairika, iyo inoshandiswa nevanhu vanopfuura zviuru zvishanu mwedzi wega wega. Kana mukurumbira wakakwira, saka kukurudzira kwakakosha kunoshanda, asi kunoda basa rakawanda, sezvo paine kukwikwidza kwakawanda.
Medium-frequency queries - yakakurumbira, asi isinganyanyozivikanwa kune yakakwirira-frequency iwo. Frequency chiratidzo: 1,000-5,000 vashandisi pamwedzi.
Low-frequency mibvunzo - idiki yakajairika (kusvika 1000 pamwedzi).
Iko kuongorora uye kusarudzwa kwemitsara yakakosha kwakakosha mukuumbwa kweiyo webhusaiti semantic musimboti. Iyo semantic core inoratidza kuti vangani vashanyi vepeji yakapihwa vanofanirwa kuti vapinde mu TOP. Izvi zvinokanganisa zvakananga kugadzirira kwezvakanyorwa. ESE edu nyanzvi dzinoshandisa anofambisirwa algorithm kubatsira kuwedzera webhusaiti. Iro peji rakakura rakagadzirirwa yakakwira-frequency mibvunzo. Izvo zvikamu zvikuru ndezvevikamu mashure uye zvidimbu zviri kunanga kune yakaderera-frequency mibvunzo.
Nzvimbo dzekutarisa nzvimbo
Kana uchitsvaga optimization yesaiti, Semalt nyanzvi dzinoongorora matanho anotevera:
SEO zvinyorwa zvekuongorora;
kuongororwa kwetraffic traffic;
SEO kuongororwa kwevanokwikwidza;
technical SEO saiti kuongorora;
kuongororwa kwezvibatanidzwa zvekunze kune iyo saiti;
kuongororwa kwesemantic chimiro chewebsite.
SEO zvinyorwa zvemukati
Munguva yekuongororwa kwezvinyorwa zveSEO, nyanzvi dzedu dzinoona kukodzera kwemavara epeji kubva pamashoko akakosha anoshandiswa kusimudzira saiti mumainjini ekutsvaga. Iko kuongororwa kwezvinyorwa zvemibvunzo yekutsvaga kwakanyatsosarudzwa tisati tatanga kusimudzira zvemukati. Isu tinotanga nekuita ongororo yakakosha yekufananidza iyo yakasimudzirwa peji kana iyo saiti yese pamwe nezvimwe TOP zvekutsvaga. Mushure meizvozvo, isu tinofanidza kureba kwechinyorwa uye nehuwandu hwemazwi ari pamawebhusaiti emakwikwi ane kukwirira kwakanyanya. Izvi zvinobvumira vashandi vedu kuti vazive kuti rimwe nerimwe rugwaro runofanira kunge rurefu. Nepo, hapana imwe nzira yekuvimbisa TOP yekutsvaga mhinduro, nekungogadzirisa mavhareji ezviratidzo isu tinogona kugadzirisa webhusaiti SEO chinhu.
Kuburikidza nekuongorora kwewebsite yepamhepo semantic musimboti, tinogona kunzwisisa zviri nani kuti kangani mazwi akakosha anowoneka mu-zvinyorwa. Kana nhamba iyi isingasvike pazvakange zvarongwa, zvinyorwa zvinofanirwa kurongedzwa. Mumwe haakwanise kururamisa rugwaro maererano nekufunga kwake pasina kuongorora zvakatsvaga. Iyo injini yekutsvaga inosimudzira nzvimbo dze TOP-10 zvinoenderana nedzimwe nzira uye izvi zvinofanirwa kutariswa nguva dzose uchinyora. Kushanda nemavara epeji uye kuenzanisa nayo nezvirimo zvevanokwikwidza kunokubvumidza kutarisa kukodzera kweiyo peji yakapihwa uye kuitisa kuongororwa kweSEO pane zvakakosha mibvunzo. Zvese izvi zvinobvumidza nyanzvi yedu kuti igamuchire ruzivo nezve maitiro ekuvandudza mamiriro esaiti mukati meGoogle yekutsvaga mhinduro uye kuwedzera kuoneka.
Webhusaiti traffic traffic
Kuongororwa kwetraffiti yewebsite kunokubvumidza iwe kuti uone kuti traffic inopinda saiti inogovaniswa sei, pamwe nekwainowanikwa traffic. Pakati pechikamu ichi, traffic kumakwikwi 'ewebsite inoongororwa kuitira kuti unzwisise zviri nani musika. Kune urwu rudzi rwekudzokorora, masevhisi anokosha anoshandiswa. Izvi zvinotitendera kuti titore ruzivo runotevera:
nhamba yevashanyi vasina kujairika;
nhamba yekuona kwemapeji pane imwe chikamu;
traffic zvinyorwa (zvakananga, zvinotumira, zvisikwa, zvakabhadharwa, uye zvemagariro izvo).
Kuongorora traffic kune saiti inzira yekuongorora traffic yevanokwikwidza.
SEO kuongorora kwevanokwikwidza
Kunyangwe kuitisa kuongorora kwewebsite yemakwikwi webhusaiti ibasa rakakura, rinotendera iwe kuti utarise kumashure kwezviitiko zvemakwikwi kuti uzive:
nzira dzekuvandudza zviri mukati;
kangani uye kangani massaiti anobatanidza kune vanokwikwidza;
izvo zvinokwikwidza nazvo izvo zvisiri muchitoro chako chepa online;
zvikanganiso pamakwikwi emakwikwi.
Kufananidza webhusaiti yako nevanokwikwidza kunoita kuti iwe unzwisise maitiro ekuvandudza yako saiti kuwanda. Nyanzvi yaSemalt ichadzidza uye kuongorora masaiti evanokwikwidza vako kuti vadzidze zvakawanda nezve yako niche musika uye gonesa ruzivo irwo kuti uvandudze zvaunotsvaga.
Webhusaiti technical analysis
Iyo webhusaiti yehunyanzvi hwekuongororwa ndeye chikamu chiri yakadzika SEO kuongorora. Kuita kuongororwa kwehunyanzvi kunoda ruzivo rwakawanda mumunda wekusimudzira webhusaiti, iyo nyanzvi dzeSemalt vane. Chinhu chakanyanya kuoma pakuongorora kwehunyanzvi kududzirwa kwedata. Yedu tekinoroji ongororo inosanganisira inotevera nzvimbo:
Kuongororwa kweiyo saiti indexing inoratidza kuti mapeji mangani akabatanidzwa mukutsvaga kweGoogle. Kana iyo injini yekutsvaga yaona peji rako makumi mashanu nguva, uye ivo vanokwikwidza vane mazana mazana matatu mapeji, webhusaiti yako haizove nenzvimbo yakakwirira mumigariro yekutsvaga yeiyo yepamusoro-frequency mazwi makuru.
Kuongororwa kwekuonekwa kwesaiti kunoratidza ese mazwi akakosha anodiwa saiti kutora chinzvimbo chinotungamira mukutsvaga injini. Ichi chishandiso chine simba kukurumidza kuwana mazwi matsva ekusimudzira uye kutsvaga mukwikwidzi mapeji anozivikanwa.
Kuongororwa kweshoko reSosaiti kunosanganisira kuunganidza dhata yakakodzera kubva kune inokwikwidza saiti, mushure mayo mibvunzo inokosha yakanyatso kuongororwa, kuongororwa pamanticics, kusunganidzwa, uye kuitiswa.
Saiti mutoro ongororo inoyera saiti mutoro kumhanya, mushure mezvo inofananidzwa pamwe nesayiti kubva ku TOP kuratidza. Maitiro aya anotendera iwe kuti uwane mapeji ane dambudziko pane yako saiti.
Saiti yekubatanidza kuongorora inoongorora yemukati inbound maji peji resaiti. Irobhoti rekutsvaga rinogona kuona mamwe mapeji esaiti kana mamwe mapeji aine zviwanikwa zvakafanana kana nzvimbo dziri kunze dzakabatana nazvo. Mune zvimwe zviitiko, kugona kubatanidza kwakakwanira kuendesa nzvimbo kune TOP kutsvaga.
Kuongororwa kweiyo saiti peji rekutanga kunodiwa kana kukurudzira kunoitwa pane yakakwira-frequency mibvunzo. Chikonzero chechipiri chekunyatsonzvera kuongororwa kweiyo peji guru ndeye kunzwisisa zviri nani kuti huremu hwemapeji hunoendeswa sei pakati pevanokwikwidza. Chikonzero chechitatu ndechekuwana yakajairika nzvimbo pakati pemhedzisiro yepamusoro uye iwo makuru mapeji uye anoshandisa iwo mazano neako epamhepo chitoro.
Kufananidza iyo meta tags kubva kune yako mukwikwidzi saiti inofanirwa mukukura. Izvi zvinoitwa uchishandisa zvinokambaira uye zvinobvumidza, pakati pezvimwe zvinhu, kuona zvikanganiso pane yako saiti, zvisiri-zvine mutsindo zvemukati, zvisiri izvo kutungamira zvakare, uye zvakaputswa zvinongedzo. Kana munhu akaongorora meta tags mune yakatarwa uye nenzira chaiyo nzira kazhinji dzinowanzo bvunzwa mibvunzo dzinogona kuwanikwa.
Kuongororwa kwekunze kubatanidza kune saiti
Kana tichiongorora zvinongedzo zvekunze kune webhusaiti, tinowana rondedzero yezvese saiti s uye mapeji ayo akabatanidza webhusaiti yako, pamwe neano anch yenguva yakatarwa yenguva. Ongororo iyi inounzwa senge fomu reti tafura-mhando mushumo uye girafu yekuwedzera kweiyo reruzivo. Zvekunze zvinongedzo uye backlinks ndeye "yakatemwa" musoro wehurukuro pakati peSEO. Parizvino, pane fungidziro yekuti hapana chinobatanidza misa chinobatsira kana pasina semantic musimboti mamiriro uye nheyo SEO mitemo haina kuteverwa.
Kuongorora kweye semantic chimiro chesaiti
Izvi zvinosanganisira matanho anotevera:
kugadzirwa kwechimiro chepakati;
kuenzanisa kwemhedzisiro uye chimiro chazvino.
Nekuongorora iyo semantic chimiro chewebsite, iwe uchaunza iwo ese mapeji ako akarongeka. Iwo semantic chimiro ndiko kurongeka kwemabhuku edhisiki ayo anoverengeka kune mushandisi uye ekutsvaga injini. Zvino, mazwi makuru anoiswa mune semantic chimiro chesaiti. Kuita ongororo yesemantic chimiro chesaiti zvakafanira, kuongororwa kwesimba renzvimbo, kuongororwa kweiyo semantic yakakosha, uye kuongorora semantics izere zvese zvinofanirwa kuitwa.